Mashandisiro anoita Tekinoroji Kwatinodya | Martech Zone
Isu takagovana posvo pa FlockTag, kuvimbika uye mubairo sisitimu yekofi uye maresitorendi ayo anobatsira kutyaira vatengi. Kugadzirira pamhepo, kuchengetedza pamhepo, wongororo dzepamhepo, midhiya enhau, makuponi edhijitari, kutsvaga kwemuno… tekinoroji iri kukanganisa zvakanyanya maratidziro atinoita uye nenzvimbo dzekudyira kazhinji.
Muchokwadi, iyo National Restaurant Association inoshuma izvo 45% yevatengi vatosarudza pekudya vachishandisa chishandiso chepamhepo. Uye 57% yevatengi shandisa wongororo dzepamhepo kuvabatsira kuona kwekudya kwavanotevera! Uye tekinoroji ichaenderera ichikanganisa iyi indasitiri mune ramangwana - kubva pamubhadharo wepamhepo kuenda kuzvirongedza uchishandisa piritsi kana nhare mbozha. Zhizha rapfuura ivo vakagadzira iyi infographic kuti vape imwe nzwisiso:
Tags: yenyika yekutandarira musanganonraOngororo dzepamhepoongororo yeresitorendiyekudyira tekinorojiRestaurants
3 Vatengi, 3 Mifananidzo yeGIF, 3 Email Kushambadzira Zvidzidzo